Factorylọ ọrụ China na ndị na - emepụta C Integration China Boselan
Ntinye CSTR, bụ ngwa a na-ahụkarị maka ụdị nke ahịhịa biogas, ihe nwere gas dị n'elu, nke dị n'okpuru ebe a bụ GFS tank. O nwere abamuru nke ịchekwa mpaghara ejiri arụ ọrụ na iji ohere dị mma, nke bụ ọnọdụ ngwa ndị ama ama ugbu a.
A na-eji otutu n'ime ha na obere ugbo (ihe dị ka 10000-20000 anụ ụlọ) na ngwaahịa ugbo na-arụrụ onwe ha na ụlọ ọrụ na-ahazi ngwaahịa. Companylọ ọrụ anyị nwere ike ịkọwa dayameta, ịdị elu ya na agba ya dị ka ihe ndị ahịa chọrọ si dị. Operationrụ ọrụ dị mfe, arụmọrụ adaba, enweghị mkpa maka ụgwọ ọrụ oke, mmezi na arụ ọrụ dị mfe. O bu ihe mbu emere otutu ndi oru ugbo na ndi ulo oru. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmata nhọpụta oke na ozi zuru ezu, biko kpọtụrụ anyị.
Nke gara aga: GFS nweere onwe ya
Osote: Nkewa CSTR